Politics Archives - Zimbabwe Today
March 11, 2021	News, Politics Comments Off on Zimbabwe to Host International Trade Conference On AfCFTA
Zimbabwe is set to host a high-level virtual international trade indaba next Tuesday to unpack the African Continental Free Trade Area (AfCFTA) Agreement and how local businesses can benefit from it. In line with the Covid-19 mitigation health protocols and limits on physical gatherings, the event will be coordinated virtually …
March 11, 2021	News, Politics Comments Off on Zimbabwe: RBZ Allays Money Supply Growth Fears
By Oliver Kazunga GOVERNMENT needs $60 billion to buy maize from farmers this marketing season but this will not trigger money supply growth in the economy, Reserve Bank of Zimbabwe (RBZ) Governor Dr John Mangudya has said. In the wake of the expected bumper harvest, Dr Mangudya, allayed fears that …
March 10, 2021	News, Politics Comments Off on Zimbabwe: Chamisa Puts Mnangagwa On Notice, Warns of Mass Protests
By Costa Nkomo The MDC Alliance leader, Nelson Chamisa plans to roll-out mass protests across the country against President Emmerson Mnangagwa’s government, which he accuses of failing to uphold the country’s Constitution. He made the warning Tuesday while addressing Zimbabweans on his party’s social media platforms where he also laid …
March 9, 2021	News, Politics Comments Off on Zimbabwe: Adhere to Covid-19 Protocols or Else – Minister
By Mukudzei Chingwere Herald Reporter Government will not hesitate to re-introduce tough Covid-19 control measures if non-compliance with regulations becomes rife and risks a spike in new infections. Speaking after being vaccinated against the virus at Wilkins Hospital in Harare yesterday, Information, Publicity and Broadcasting Services Minister Monica Mutsvangwa said …
March 9, 2021	News, Politics Comments Off on Zimbabwe: Forex Auction Is Market Driven, Minister Ncube
FOREIGN currency auctions are market driven and represent an expression of choice in the trade of the hard currency, a development that has stabilised the exchange rate in Zimbabwe. This was said by Finance and Economic Development Minister Professor Mthuli Ncube while responding to questions in the National Assembly last …
Zimbabwe: ‘I Have Quit Politics’ – Joice Mujuru
March 9, 2021	News, Politics Comments Off on Zimbabwe: ‘I Have Quit Politics’ – Joice Mujuru
Former Vice President Joice Mujuru has said she no longer has any political ambitions and is now concentrating on raising her family and farming. Mujuru was VP for nearly 10 years before she was expelled from Zanu PF in 2015 on the back of a slew of allegations, among them …
March 8, 2021	News, Politics Comments Off on Zimbabwe: Legal Watchdog Says Govt Lockdown Policies Confusing
Legal and Parliamentary watchdog Veritas Zimbabwe has criticised the multiple changes imposed on the country’s lockdown order saying this was now confusing to ordinary citizens. This is after Zimbabwean authorities have issued four Statutory Instruments since January this year with some seemingly contradicting the others. Government issued statutory instruments 45 …
March 8, 2021	News, Politics Comments Off on Zimbabwe: Zanu-PF MPs Want Chamisa, Biti Barred From Running for Public Office
By Costa Nkomo Some Zanu PF legislators say Zimbabwe’s proposed Patriotic Bill should have clauses that impose a ban on local politicians who advocate sanctions against the country. Mberengwa South legislator Alum Mpofu and Pupurayi Togarepi were both contributing to debate on the proposed Patriotic Bill. “What do you do …
March 7, 2021	News, Politics Comments Off on Zimbabwe: Groups Urge Lucerne Outgrowers Scheme for Chilonga Community
Mutare — A Manicaland-based environmental watchdog has called on government to facilitate an outgrowers scheme for the Shangani community which faces eviction from its ancestral land in order to pave way for a multi-million-dollar Lucerne grass farming project. Lucerne grass is used for hay and cow forage. Over 12 000 …
March 6, 2021	News, Politics Comments Off on Zimbabwe: Govt Will Not Rig Exchange Rate – Mthuli Ncube
By Anna Chibamu GOVERNMENT will not attempt to impose any auction rate different from the prevailing one on the market as doing so will undermine the auction system, Finance Minister Mthuli Ncube has said. Ncube was responding to MPs in Parliament Wednesday after the legislators had called on the Treasury …
‘Stop Throwing Sewage At Us’ – Kasukuwere, Mzembi to Chinamasa